Torohevitra tsara indrindra hiantohana ny dia azo antoka sy sambatra
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Torohevitra tsara indrindra hiantohana ny dia azo antoka sy sambatra
Mety hahafinaritra anao ny mitsidika toerana izay ahafahanao tsy mitonona anarana; toy ny hoe olon-kafa ianao mandritra ny herinandro na roa. Ny fandehanana any amin'ny toerana vaovao dia mitondra hery sy lafy tsaratsara kokoa ho antsika hatrany. Toy ny fitsaboana tena ilaina izany, fialana amin'ny olana mahazatra.
Na izany aza, raha te handeha soa aman-tsara ianao dia mila mitandrina satria misy karazana fandrahonana mety hatrehinao. Indraindray, ireo fandrahonana ireo dia manimba ny fanahin'ny dia amin'ny famoronana korontana be dia be, ary mahasorena izany.
Noho izany, ny fiantohana ny dia azo antoka sy mahafinaritra dia eo am-pelatananao, ary azonao atao izany amin'ny fanarahana ireo torohevitra etsy ambany.
Mamorona Backup nomerika amin'ny angona manan-danja
Ny angon-drakitra dia ahiahy lehibe ho an'ireo mpifindrafindra monina nomerika. Noho izany, ataovy azo antoka fa manana backup foana ny mombamomba ny pasipaoronao, ny dianao, ny famandrihana hotely ary ny zavatra ilaina hafa. Ny famoronana backup dia hanome tombony anao raha misy zavatra tsy ampoizina mitranga amin'ny antontan-taratasinao tany am-boalohany. Azonao atao foana ny maka ny antontan-taratasinao avy amin'io backup io amin'ny fitaovana vaovao.
Ho fanampin'izany, fahendrena ny tsy mizara data be loatra amin'ny hafa amin'ny toerana ho an'ny daholobe toy ny cyber café. Betsaka kokoa ny mety hisian'ny olona mangalatra ny mombamomba anao manokana.
Lazao hoe Tsia amin'ny Couchsurfing
Mety tsy fantatrao izany, saingy fandriana dia toy ny aventure kokoa, saingy misy ny risika, toy ny mijanona amin'ny olon-tsy fantatra dia mety hahatonga anao ho mora voan'ny halatra sy karazana fanorisorenana hafa. Noho izany, tsara kokoa ny mandoa vola fanampiny ary mijanona ao amin'ny hotely izay ahafahanao mahazo fiarovana farany miaraka amin'ny fiainana manokana.
Mitandrema amin'ny mpangarom-paosy ary mitandrema amin'ny vahoaka
Mitandrema mandrakariva rehefa mandehandeha eny amin'ny tsena eo an-toerana na any amin'ny toerana be olona. Mety hanandrana haka ny entanao ny mpangarom-paosy raha fantany fa variana ianao. Noho izany, miezaha mitandrina hatrany amin'ny vahiny akaiky anao ary tehirizo eo anoloan'ny tratranao ny entana sarobidy fa tsy ny paosinao lamosina mba hiarovana azy ireo.
Zarao amin'olona ny dianao
Fomba tsara hanamaivanana ny olon-tianao izany raha tena manahy momba ny dianao izy ireo. Tsy maninona na mandeha irery na miaraka amin'ny vondrona ianao; Miezaha foana hizara ny dianao amin'ny fianakavianao na amin'ny olona azonao itokisana. Miantoka izany fa raha misy loza mitranga, farafaharatsiny misy mahafantatra ny toerana misy anao ary afaka manatona anao.
Noho izany, azonao atao ny mizara ny antsipirian'ny famandrihana hotely na toerana hafa hipetrahanao. Ankoatra izany, afaka mandroso dingana iray ianao amin'ny fizarana ny toerana misy anao mivantana amin'izy ireo.
Mitondrà kitapo vonjy maika foana
Tsara kokoa ny miomana amin'izay mety ho vonjy taitra ara-pahasalamana satria ny fahazoana vonjy maika ara-potoana dia mety hanamora ny zavatra, izay tsy azo atao raha tsy vonona ianao. Noho izany, fahendrena ny mitazona kitapo kely vonjy maika ao anaty entanao ary ento miaraka aminao mandritra ny dia. Mazava ho azy fa jereo ny torolàlana ankapobeny momba ny fitaterana zavatra toy izany.
Halaviro ny Wi-Fi maimaim-poana
Mora very any an-tany hafa ny mpandeha. Avy eo, mety hikaroka haingana ny tambajotra Wi-Fi maimaim-poana akaiky indrindra izy ireo mba hahitana ny toerana misy azy amin'ny sari-tany. Na izany aza, mitandrema rehefa mifandray amin'ny tambajotra Wi-Fi maimaim-poana. Matetika izy ireo no tsy azo antoka, ary tokony ho mahazo VPN alohan'ny hifandraisana amin'izy ireo. Mifandraisa amin'ny mpizara VPN lavitra ary ataovy azo antoka ny fifamoivoizana amin'ny Internet.
Jereo ny fiantohana fiantohana anao
Azonao atao ny manamarina ny karazana fandrakofana andraikitra atolotry ny politikan'ny fiantohana ho an'ny entana very na ny loza ara-pahasalamana rehefa miala ny trano. Ary koa, raha tsy manana fiantohana dia tsy maintsy mieritreritra ny hividy iray izao ianao. Izy io dia afaka manavotra ireo zavatra mendri-kaja izay nangalarina nandritra ny dia ary nanarona ny fiampangana ara-pitsaboana.
Torolàlana momba ny COVID-19
Raha mandeha any ivelany ianao dia tsara ny manaraka ny torolàlana momba ny fiarovana amin'ny COVID-19 ka raha misy zavatra mitranga dia afaka mampandre ny tompon'andraikitra avy hatrany. Ary koa, mety ho tsara kokoa ny miala amin'ny toerana sasany ary mifikitra amin'ny dia lavitra eo an-toerana.
Ampahafantaro ny Banky momba ny dia
Fomba tsara ny mampahafantatra ny bankinao fa mandeha any ivelany ianao mba hampihenana ny mety hisian'ny asa hosoka amin'ny kaontinao. Ankoatra izany, ho fantatry ny bankinao fa avy aminao ny fifampiraharahana vita amin'ny karatrao any amin'ny firenena hafa, ary tsy hanakana ny karatra izany.
Miezaha hanao toy ny eo an-toerana
Io no iray amin'ireo fomba azo antoka indrindra hivezivezena any amin'ny firenena rehetra satria tsy hisarika ny saina ho amin'ny tenanao ianao. Manaova toy ny eo an-toerana fotsiny ary miezaha hifanaraka amin'izy ireo. Izany dia hampihena ho azy ny mety ho hitan'ny olona fa tsy eo an-toerana ianao.
Ankoatra izany, fantaro ny tanàna sy ny dianao alohan'ny hialana amin'ny hotely. Raha mila mitady torolalana mandritra ny fotoana maharitra ianao dia eritrereto ny hiditra ao amin'ny fivarotana na kafe mba hanao izany fa tsy hijanona any ivelany.
Manaova fikarohana araka ny tokony ho izy momba ny toerana haleha
Tena ilaina ny manao fikarohana araka ny tokony ho izy momba ny toerana haleha miaraka amin'ireo toro-hevitra sy tolo-kevitra momba ny dia. Arakaraka ny fahalalana anananao momba ny toerana halehanao no ahafahanao manomana ny tenanao ho amin'izany. Hanampy anao amin'ny sarintany ihany koa ireo toerana mety hampidi-doza anao ary tsy maintsy ialana mba ho azo antoka. Misy maro koa fisolokiana fitsangatsanganana izay tokony ho fantatrao mba ho salama. Ohatra, raha misy olon-tsy fantatra mitady hanome anao bracelet, dia aza raisina izany.
Mikaroka sy mankafy zava-baovao ny fitsangatsanganana, saingy ilaina ihany koa ny miantoka ny fiarovana anao rehefa manao izany. Raha misy loza na trangan-javatra mampalahelo mitranga, dia tsy maintsy miomana mialoha ianao. Ary koa, na aiza na aiza alehanao, tehirizo foana ny laharana vonjy maika amin'io toerana io mba handraisana fepetra ara-potoana.